အစ္စလာမ်ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ PHR အဖွဲ့ တောင်းဆို | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်ယူ
လူမျိုးခွဲခြားရေးအား အဆုံးသတ်ရန် အချိန်တန်ပြီ (ဘာသာပြန်) »
21.05.2013 ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက မိတ္ထီလာမြို့ အဓိကရုဏ်းအတွင်း အစ္စလာမ်ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်း တစ်ကျောင်း မီးရှို့ခံခဲ့ရမှုကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အပါအ၀င် ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၂၄ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Physicians for Human Rights လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးက အစီရင်ခံတစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ဒါကို အသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မမေစန္ဒီက တင်ပြထားပါတယ်။ ကျောင်းသား ၁၂၀ ရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ကျောင်းတစ်ကျောင်း မီးရှို့ခံရမှုအတွင်း ဆရာ၊ ဆရာမ ၄ ဦးအပါအ၀င် ကလေး အယောက်၂၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Physicians for Human Rights PHR လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် PHR အဖွဲ့ကြီးက မီးလောင်မှုအတွင်း လွတ်မြောက်ခဲ့သူ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အနီးနားမှာရှိတဲ့ မျက်မြင်သက်သေတချို့ကို PHR အဖွဲ့ကြီးက တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလို အပြစ်မဲ့ ကလေးငယ်တွေ ရက်ရက်စက်စက် သေဆုံးမှုတွေကို မဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ပိုပြီး ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဦးဆောင် ရေးသားပြုစုခဲ့သူ ရစ်ချတ် စော်လွန်မ် (Richard Sollom) က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းတဲ့ အခါမှာတော့ –
“မီးလောင်တဲ့အထဲက လွတ်လာတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ဆရာဆရာမတွေကို မေးကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ အားလုံး က ဒီအကြောင်းကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲကြားခဲ့ရတယ်။ မင်္ဂလာဈေးရုံရပ်ကွက်က သူတို့ကျောင်းကို ဒုတ်တွေ၊ အချွန်တွေ၊ ဓါးတွေ၊ သံပိုက်တွေ ကိုင်ထားတဲ့သူတွေက ကျောင်းကို မီးရှို့ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားတွေကို မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ ဒါဟာ မတ်လ ၂၀၊ ၂၁ ရက်နေ့တုန်းက မိတ္ထီလာ မြို့ တ၀ှမ်းမှာ လူနေအိမ်တွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေ အများအပြား ဆုံးရှုံးပျက်ဆီးခဲ့တဲ့ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေထဲကတခုဖြစ်ပေမယ့် ဒါကိုသေသေချာချာဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။”
မျက်မြင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ဒီအကြမ်းဖက်မှုမှာ တာဝန်ရှိ ရဲတွေက ကလေးငယ်တွေကို ကာကွယ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘဲ ဒီကိစ္စကို ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းခြင်း၊ အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကို ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုခဲ့ဘူးလို့ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာဟာ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို တရားဝင်ခရီး လာရောက် လည်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ထွက်လာတာလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလို အခါသမယမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဥပေက္ခာ ပြုမထားသင့်ဘူးလို့ ရစ်ချတ် စော်လွန်မ် (Richard Sollom) က ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် တနင်္လာနေ့မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူနည်းစု လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားဖို့ သမ္မတ အိုဘားမားအနေနဲ့ တိုက်တွန်းသင့်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“အခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အရှိန်အ၀ါက ကြီးမားနေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးကတည်းက စီးပွားရေး အထောက်အပံ့တွေ၊ နိုင်ငံရေး အကူအညီတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Physicians for Human Rights အနေနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကို ပြဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုဟာ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်ရောက်တဲ့အထိ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတချို့ ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ရဲ့ ပထမခြေလှမ်းတွေထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေးတွေ၊ ဘာသာရေး ဆန့်ကျင်ရေးတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နဲ့ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”
“ဂျနီဗာမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီအနေနဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်တာမရှိဘဲ အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ မူဆလင်တချို့ကိုပဲ ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် ချမှတ်ထားပြီးတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း တရားစွဲဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘာသာကွဲ လူနည်းစုတွေကို အကာအကွယ်ပြုဖို့ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ၊ သတင်းထောက်တွေနဲ့ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းတွေကို အတားအဆီးမရှိ ၀င်ရောက်ခွင့် ပြုသင့်တယ်လို့လည်း အစီရင်ခံစာထဲမှာ ထည့်သွင်း အကြံပြုထားပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကို အရေးမယူမခြင်း တခြား လုံခြုံရေး အထောက်အပံ့တွေ မပေးဖို့လည်း အစီရင်ခံစာထဲမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အေးချမ်းမွန် Credit & Copy From >VOA < Thank For Your Post
သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာန၏ မူရင်းရေးသားချက် သာဖြစ်သည်
Aye Chan Mon'
Tags: Advocacy Organizations, Burma, Human Rights and Liberties, Muslim, Physicians for Human Rights, Thein Sein, United States, Voice of America
This entry was posted on May 21, 2013 at 11:29 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.